UK: Boris oo ku fashilay qorshihiisii Doorasho deg deg ah oo la qabto • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / UK: Boris oo ku fashilay qorshihiisii Doorasho deg deg ah oo la qabto
UK: Boris oo ku fashilay qorshihiisii Doorasho deg deg ah oo la qabto
September 10, 2019 - By: Hanad Askar
Baarlamaanka UK oo uu kalfadhigiisii soo dhamaaday ayaa xalay kulankii ugu danbeeyey oo ay xildhibaanada yeesheen ku qaadacay codsi uu usoo gudbiyey Raysalwasaare Boris Johnson oo ahayd in la qabto doorasho deg deg ah bisha soo socota ee Oktoober.
Boris Johnson oo aan xiligan taageero badan ku heysan Baarlamaanka ayaa doonayey in la qabto doorasho cusub isagoo isleh waxaad heli doontaa aqlabiyada baarlamaanka si uu u hirgeliyo qorshihiisa Brexit dhamaadka bisha Oktoober, waa markii sadexaad oo uu Boris Johnson ku guuldareysto inuu qorshihiisa marsiiyo Baarlamaanka, xili ay qeyb kamid ah Xildhibaanada xisbigiisa ay la safteen Mucaaridka oo diidan qorshaha xukuumada Johnson.
Xukuumada ayaa u baahneyd inay hesho ugu yaraan codod gaaraya 434 ee Xildhibaanada Golaha Wakiilada oo ka kooban 650 xildhibaan si loo ansixiyo qabashada doorasho deg deg ah. Boris Johnson iyo Wasiiradiisa ayaa helay 293 cod oo kaliya.
Raysalwasaaraha UK ayaa todobaadkii hore Xisbigiisa Conservative party ka tuuray 21 xubnood oo iyagu taageeray mooshinkii todobaadkii hore laga keenay Xukuumadiisa inaysan hirgelin karin Brexit inay isaga baxaan Midowga Yurub iyagoo aan keenin wax heshiis ah.
Baarlamaanka ayaa aqlabiyadiisa diidan in UK isaga baxo Midowga Yurub iyagoo aan wax heshiis ganacsi ah lasii gelin dalalka kale ee EU-da, maadaama heshiis la’aan oo ay ka baxaan Midowga ay wadanka Ingiriiska uu waayi doono xiriirkii uu la lahaa suuqa adduunka ugu weyn ee dalalka Midowga Yurub.
Xildhibaanada ayaa diidan in xiligan loo ogolaado Boris Johnson iyo Xukuumadiisa inay qabtaan Doorasho, iyagoo sheegay in marka Baarlamaanka arrintaasi u ansixiyo in Boris uu bedali doono xiliga doorashada.
Golaha Wakiilada ayaa hada galaya fasax illaa 14ka bisha Oktoober, xili Midowga Yurub wakhtigii uu u qabtay UK inay isaga baxaan EU-da ay ku egtahay 31ka bisha Oktoober.